अध्यात्म तिर कलाकार | ArtistSansar.com
अध्यात्म तिर कलाकार
एक जमानाका चर्चित हिरो शिव श्रेष्ठ जोसँग भेट्दा पनि ॐ साईराम! भन्छन्। उनका कामको प्रसङ्ग निकाल्दा साईबाबाको आशीर्वाद! भन्छन्। १० वर्षअघि कान्छी श्रीमती भित्र्याएपछि साईबाबाको अनन्य भक्त बनेका उनी आफ्ना हरेक सफलताको जस साईबाबालाई नै दिन्छन्। भन्छन्, “म जे छु, बाबाकै आशीर्वादले छु।”
बहुदलवादीहरूलाई सिध्याउन महाराजसँग खुकुरी मागेर चर्चामा आएका निर्देशक मोहन निरौला भने गत नौ वर्षदेखि कालीमाताको साधनामा छन्। झ्ण्डै ६ वर्ष त उनले निक्खर कालो बस्त्र धारण गरे। अहिले उनको दैनिक तीन घण्टा कालीका नाममा समर्पित छ। कालीमा शरणागत हुनुअघि उनी निखिलेश्वर नामका भारतीय स्वामीका चेला थिए।
अदृश्य शक्तिको प्रेरणाले कालीको उपासक बनाएको बताउने निरौला भन्छन्, “मानिसको जीवन प्रारब्धमा लेखिए बमोजिम सञ्चालित हुन्छ, अदृश्य शक्तिले जे गराउँछ, हामीले त्यही गर्ने हो।चरित्र अभिनेता भीमवरसिंह थापा त झ्न् नायक श्रेष्ठ र निर्देशक निरौलाभन्दा अगाडि नै अध्यात्ममा थिए। डेढ दशक अघिबाट विपश्यना ध्यानमा लीन हुन थालेका उनी राजकुमार सिद्धार्थले दरबारको सुखसयल त्यागेपछि गयामा प्राप्त गरेको बुद्धत्वका अनुयायी हुन्। विपश्यना ध्यानले जीवन बाँच्ने कला सिकाएको उनको अनुभव छ। विपश्यना मार्गका सहायक आचार्य रहेका थापाका अनुसार अब उनीसँग जीवनका भय, रिस, लोभ, मोह, द्वेष केही बाँकी छैनन्।
यसैगरी, मोडल तथा नायिका सोभिता सिम्खडा आचार्य रजनीशको उदात्त भक्त बनेकी छन्। ध्यानका लागि नियमित तपोवन जाने हुनाले कतिपय प्रशंसक उनलाई वनदेवी पनि भन्छन्। तर, जसले जे भने पनि सन्न्यासिनी बनिसकेकी उनी भन्छिन्, “मानिस सुख-शान्ति चाहन्छ, तर भौतिक साधनबाट मात्रै त्यो प्राप्त हुँदैन, त्यसैले अध्यात्मतिर लागियो।”दोस्रो घरजमका लागि नायिका सञ्चिता लुइँटेललाई लिएर मुम्बई पसेका निखिल उप्रेती पनि कलिउडका धार्मिक स्वभावका हिरो हुन्। उनी हरेक बिहान एक घण्टा पूजापाठ गर्छन्। हरेराम हरेकृष्ण लेखिएको बस्त्रलाई क्याजुअल ड्रेस बनाउन रुचाउँछन्। सुटिङबाट फुर्सद निकाली-निकाली धार्मिक प्रवचन सुन्न दौडने गरेका निखिल कतिपय वेला त सञ्चितालाई लिएरै पशुपतिनाथ पुग्थे।
धेरैलाई मेसो छैन, नायिका विपना थापा र निर्देशक सुनिल पाण्डे पनि निखिल जस्तै समर्पित शिवभक्त हुन्। सुनिल सोमबार र शनिबार पशुपति दर्शनमा जान्छन्। विपना ताल पर्दा गलाभरि रुद्राक्ष धारण गरेर बस्छिन्। यसैगरी, खलनायक मुकुन्द थापा साईभक्त हुन् भने अर्का खलनायक पुष्प श्रेष्ठ कठोर हनुमानभक्त।कलाकार शिशिर सापकोटा भारतीय बाबा डा. नारायणदत्त श्रीमालीका चेला हुन्। श्रीमालीको नेपालस्थित सिद्धाश्रम शक्तिकेन्द्रका तीन सिद्धपुरुषमध्येका एक रहेका सापकोटा अहिले गृहस्थ जीवन त्यागेर हैदरावादमा सन्न्यासी भएका छन्। निर्देशक मोहन निरौला, कलाकारहरू दिनेश कार्की र दीपाश्री निरौला पहिला सापकोटाका चेला-चेली थिए। अर्का निर्देशक दिनेश कार्की भने भारतीय स्वामी निखिलेश्वरबाट दीक्षित अध्यात्मवादी हुन्।
अहिलेका नायिकाहरूमध्ये पूजना प्रधानलाई सबभन्दा निर्लिप्त अध्यात्मवादी भन्दा फरक पर्दैन। उनी पुरानोबानेश्वस्थित पुष्पराज पुरुषको जयसङ्गत आश्रममै बस्छिन्, ध्यान गर्छिन्, योग सिकाउँछिन्। पूजनाले आफ्नो थरमा पनि प्रधानलाई खारेज गरेर स्त्री राखेकी छन्। जात-धर्ममा होइन, कर्ममा जोड दिनुपर्छ भन्ने पुष्पराजको सङ्गतमार्गमा व्यक्तिको थरले मान्यता पाउँदैन। हिजोआजपूजना स्त्री जोसँग भेट्दा पनि नमस्तेको साटो जयसङ्गत भन्छिन्। एकताका कामुक फोटोसेसन गरेर चर्चामा आएकी पूजना भन्छिन्, “अध्यात्ममा लागेपछि जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। सोच बदलिएपछि जीवनशैलीमा परिवर्तन हुने नै भयो, जय सङ्गत!”
पूजना झ्ैं एकताका फोटोसेसन गरेर चर्चित बनेकी मोडल कोहीनुर सिंहले आनी बनेर फेरि चर्चा बटुलिन्। केही समयपछि बिहे गरेर पुनः चर्चामा आइन् अनि हराइन्। कामभन्दा बढी काण्डका कारण चर्चामा रहने अर्की मोडल तथा नायिका पूजा लामा पनि अहिले कोहीनुर जस्तै चर्चामा छिन्, धर्म नै परिवर्तन गरेर। बौद्धमार्गीबाट इस्लामधर्मावलम्बी बनेकी पूजा हिजोआज बुर्का लगाएर हिँड्छिन्। नाम पनि आम्ना फारुकी राखेकी छन्। थाह छैन, उनको यो व्यक्तित्व केही दिन चर्चामा आउने गेट अप हो कि स्थायी धार्मिक आस्था!
चाइनिज कार्निभल एण्ड टुरिज्म फेस्टिभलमा मादल र सारंगी